မြန်မာ ၁-ယောက်ရဲ့ Where are you come from? လို့ အမေးခံရတဲ့ ည... ကိုစာပြောတဲ့ ဘကုန်းတွေ သောက်ကြတဲ့ Baron Beer သောက်ပြီး မူးတဲ့ညပေါ့... မှတ်မှတ်ရရ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှန်း မသိရတဲ့ မန်းလေးမြို့ရဲ့ တခေတ်တခါက ဗိုလ်ချုပ် ကြေးရုပ် ရှိခဲ့ဖူးပြီး ရေပေါ် စားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ကျုံးထောင့်နားက မီးပွိုင့်ပေါ့ဗျာ...
My Labels: Photos, Mandalay, Myanmar, Night shot
ဒုတိယပုံက လန်းလှချည်လား.. မိုက်တယ် မိုက်တယ်.. မတရားကို ကြိုက်တယ်
ပုံလေးတွေ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ... ဘကုန်းတွေဆိုတာ ဘာတုန်းဗျ။ Baron Sales Girls လေးတွေကတော့ ရန်ကုန်မှာ လန်းတယ်ဗျ ...... :)
ဒုတိယပုံက ၂၆ ၈၀ ဒေါင့်လား ?
ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်တော့ လန့်သွားတာ ပဲဗျာ။ ၀ိဥာဉ်ပုံများ တင်ထားသလား ခင်ရတယ်။ မင်္ဂလာနှစ်သစ် ပါဗျာ...။
Burma Image said…
Glad to see fellow Burmese who have the same interest as me. I like your Mandalay night shot. Very active and alive. Explosure was right on. Please post more. I would like to invite you to my blog at http://burmaimage.blogspot.com . I just started it and will be putting more images later. Take care.